Kaniiniga ka hortaga uurka | GURIGA HAWEENKA
Home » Heath » Kaniiniga ka hortaga uurka
Muxuu yahay ?
Waa kaniini uu ku jiro hormoon kooban lana mid ah kan dumarka jirkoot soo saaraan.
Qaabkuu wax u qabto
Wuxuu u diidaa bacriminta ugxamaha, nasiino uu galiyaa.
Waxay ku wareegataa xuub qafiifah oo ku yaala minka, kaasoo diyaar u ahayn inuu sameeyo ukumo.
Waxay adkeenee dheecaanka minka afkiisa waxayna sameysataa isbaaro lid ku ah shahwada.
Hadaba waxay ahaataba, haddii aad kaniiniga si sax u isticmaashid wuxuu ka hor tagaayaa uurka.
Marka ugu horeyso ood isticmaaleysid kaniiniga:
Ka bilaaw malinta koowaad ee caadada kuu timaado
Baakadda ugu horeyso = kahortag degdeg.
Maalin walba qaado kaniiniga isku waqti
(walwal la’aan waxaad iloobikartaa: ugu badnaan 12 saacadood).
Labada baako dhexdooda oo 21 kaniini: ka naso 7 maalmood
22 xabo ahna: ka naso 6 maalmood
Hadaadan iloobin waad ku badbaadeysaa waqtiga nasiinada
xataa. Caadada waxey kuu imaandootaa inta aad ku jirto nasiinada, badanaa waxaa kaa imaankaro dhiig yar oo xanuunn yar la socdo.
Bilaaw baakada kale isla maalintii isbuuca aad kii hore bilaawday, saasna kuwad billaha ku xigaana.
Ha ilaawin inaad baakad kale bilowdid: Nasiinadana iney 7 maalmood dhaafto ma’ahan!
… dhiig kaa yimaado intaad kanniiniga isticmaaleysid, Marnaba ha joojin wad kanniiniga si toos ah, wax dhib ah malahan. Hadii dhiigii uu sii socdo bisha kale, kala hadal dhaqtarkaaga.
… aad mantagtid ama shubantid, waxaa macquul ah inuu kaniinigii si fiican jirkaaga u galin iyo wax tarkiisa yaraado. Wad kanniniga isticmaalkiisa ee salbatiibo isticmaal ilaa 7 maalmood. Hadaad mantagtid 4 saacadood kadib xiligii aad qaadatay kaniiniga, isticmaal midkale (tusaalo ahaan kalanabaxso xabat
baakadka keyd ka ah).
… aad daawooyin kale qaadatid sida antibiyootikada, kan jareeska ama kan korka dejiyo
Waydii dhaqtarkaaga hadii uu kaniinigii wali wax tarleeyahay, sababtoo ah daawooyinkaas waxay dhimikaraan waxtarka kaniiniga kahortaga. Wad kaniiniga ee isticmaalna salbatiibada.
… aad wax galmo joojisit (hadii aad ninka kalatagtaan, ama waqti dheer kala maqnaataan), dhameystir baakadkii kuu furnaa intaadan kaniiniga kuligiis joojin, salbatiibana meel gar ah dhigo.
… ay caadada kugu dhicin xilgii nasiinada aad ku jirtay adigoo
– kanniiniga ilodin
– mantagin ama shubmin
– daawo kala isticmaalin
Baakad cusub bilaaw waqtigii aad bilaawi laheed, lanatasho dhaqtarkaaga ama xafiiska qorshaha qoyska.
Kaniiniga la iloobay
Kanniiniga halmar la iloobay wax dhib ah masameeyo haduusan dhaafin 12 saacadood.
Haduu dhaafo 12 saaccdood xiligii aad qaadan jirtay, ka hortagaas ma sugna.
Maxaad sameeynkaraa ?
Qaado kaniinigii aad iloowday mar ala markaad xasuusato, xitaa hadey labo isku maalin ama isku mar naqoto.
Hadii aadan samenin wax isu tag ah kadib maalinkii aad iloowday ama 7 dii maalin ee la soodhaafay, baakada wad ee isticmaalna salbatiibo ilaa 7 maalmood.
Waxaa lagama maarmaan ah hadaad kaniiniga hilmaantid inaad 7 maalmood oo joogti ah kaniinga inaad qaadatid si uu kahortaga wax utaro.
Inta aad sugeesid, kanniiniga wad ee hadii aad galmood sameyneysid, isticmaal salbatiibo ilaa 7 maalmood.
Weli waxaad ogaataa: in dhiig kaa imaankaro kaniinniga iloowday dartiisa.
(Somalisch / somali / Afsoomaali – Die Pille / La pilule oestroprogestative)
Previous: AKHRISO Qiso Aduunka Gilgishay, Askari Maraykan ah oo Dilay 2746 Qof
Next: Faraantiga Dumarka Geedkooda La galsho ee uurka Ka Hortaga (Vaginale ring) & dumarka Somaliyeed